EverBestMM – Page 637 – Daily Special News
လူရွှင်တော်ဥသြ ရဲ့ ကျန်းမာေ ရး အ တွက် ထောက် ပံ့ငွေသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်
By everbestPosted on March 5, 2019
ခင် လှိုင် နဲ့ အတူ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံလေး တို့ပါဝင်တဲ့ ဇဝန မီဒီယာ အဖွဲ့သားတွေက လူရွှင်တော် ဥသြအတွက် ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့ငွေ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်လကို တစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး လှူဒါန်းသွားပါမယ်တဲ့။ ဟာ သလူရွှင်တော်၊ […]
တက္က သိုလ် ဝင် စာမေးပွဲ စာဖြေခန်း များတွ င်သုံးမ ည့် တိုင်ကပ်နာရီများအတွက် တင်ဒါခေါ်
တ က္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေခန်းများတွင်အသုံးပြုမည့် တိုင်ကပ်နာရီများ ဝယ်ယူရန် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်မှ မတ်လ ၂၁ ​ရက်အထိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူနေသည်။ မတ် လ ၆ ရက်တွင် ကျင်း ပမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲက စ၍ […]
သေဆုံး သူ သံဃာ(၄) ပါးနှ င့် (၁၁) ဦး၊ ဒဏ် ရာရ သူ (၂၅)ဦး အထိရှိလာ (နေပြည်တော်-ရန်ကုန်လမ်း)
မတ် လ(၅)ရက်(၀၆၀၀) နာရီချိန်. မိုင်တိုင် ၇၇/၃-၇၇/၄ အကြား High class. Express ယာဉ်တိမ်းမှောက် ဖြစ်စဉ် (၀၉ ၀၀) နာရီချိန်ထိ သတင်းဆက်… သေ ဆုံး. သံဃာ(၄) ပါး. ကျား( […]
ငွေကြေး အခက် အခဲ ပြေလည်ေ စသော အစီအ ရင်
ကျွန် မ ရဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ် လေး ပါ။ ဟိုး လွန် ခဲ့ တဲ့ ဆယ် စု့ နှစ် က ကျမ ရဲ့ အသက် ၂၃ -၂၄ မှာ […]
ကြည့် မိ သူ တိုင်း တဖြု တ်ဖြုတ်ကြွေ သွား ရလော က် တဲ့ ဆက်စီ ကျကျ အကြမ်းစား Tik Tok ဗီဒီယို လေးတွေ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ အိမ့်ထရက်ရှာ
အိ မျ့ထရကျရှာကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အနုပညာလောကမှာ နာမညျကွီးအောငျမွငျနတေဲ့ တောငျကွီးသူ အခြောအလှ အနုပညာရှငျတှထေဲက တဈဦးဖွဈသလို အဆိုတျောတဈဦး ၊ မျောဒယျလျ နဲ့ အက Dancer မလေးတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ လကျရှိ ရနျကုနျမှာနထေိုငျပွီး […]
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး များ အ တွက်.. ဘဝတစ် သက်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ
မိမိတို့ ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး ဖြစ်သောသင်သည် […]
ရဲက စီစီ တီဗွီ ပြ မှ ” ရထားေ ပါ် လူ အများေ ရှ့မှာ. .သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ဦးနဲ့ မူးပြီး လိင်ဆက်ဆံခဲ့မိ”လို့ အဖမ်းခံရတာမှန်း သိလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီး. .
ရထားေ ပ်ါက ခရီးသည်တစ်ဦးဖြစ်သူ ၁၆ နှစ်ကောင်လေးတစ်ယောက်မှ ရဲကိုဖုန်းဆက်တိုင်ကြားထားတဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စွပ်စွဲခံရသူ အသက် ၄၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Amanda Barrow ဟာမှ မမှတ်မိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ သူမ ရဲ့ ဆရာဝန်ကတော့ “သူဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ တကယ်ကို […]
အကယ် ဒမီေ ရွှကြိုစုံ တွဲလေးေ တွ အဖြစ်မြင် ရ မယ့်ရွှေကြိုစုံတွဲ(၅)စုံတွဲ
(၁) ထက် လင်းအောင်နှင့် မေတိုးခိုင် သ ရုပ်ဆောင် နေထက်လင်းရဲ့သားထက်လင်းအောင်ရွှေကြိုဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရင်ထဲကခံစားချက်လေးပြောပြပါဦး။ပြောပြလို့မရအောင် တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရတုန်းကတောင်လူတွေကအများကြီးနဲ့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပျော်ပါတယ်။စင်ပေါ်တက်ဖို့နည်းနည်းတော့ကြောက်ပါတယ်။အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုငယ်ငယ်ကမလိုက်ဖူးဘူး။ဒါကပထမဦးဆုံးပဲ။ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာလည်းအများကြီးပါ။စင်မြင့်ပေါ်တက်ရမှာဆိုတော့အဖေကဘာတွေဆုံးမထားသေးလဲ။အဖေကအားပေးတာပေါ့။ စင်မြင့်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါ မကြောက်ဖို့ မှာထားပါတယ်။ သရုပ်ေ ဆာင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့တူမ မေတိုးခိုင်ရွှေကြိုဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ရင်ထဲက ခံစားချက်လေးပြောပြပါဦး။ရွှေကြိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ပျော်ပါတယ်။၀မ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဂုဏ်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရွှေကြိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာဂုဏ်ယူစရာအလုပ်ဆိုတော့ညီမလည်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာနဲ့လက်ခံဖြစ်တာပါ။ရွှေကြိုဖြစ်ပြီးသွားရင်အကုန်လုံးကအောင်မြင်သွားကြတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်။ အဲ့လိုမျိုးတော့ အများကြီး […]
ချစ်စ ရာမြန်မာ ဝတ်စုံလေးဝတ် ကာ ဗမာ စကားဖြင့် မိတ် ဆက်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသူလေးနှစ်ယောက်
လက် ရှိမြန်မာနိုင်ငံကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံခြားသားများစွာလည်း မကြာခဏလာရောက်လေ့ရှိတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ပြည်တွင်းလာရောက်လေ့လာသူတွေထဲမှာ ချစ်စရာကိုရီးယားနိုင်ငံခြားသားများစွာလာရောက်လေ့ရှိပြီး ပြည်တွင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို မကြာခဏသိမ်းပိုက်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ အ ဆိုပါ ကိုရီယားသူလေးတွေထဲမှာ ဗမာစကားဝဲတဲတဲဖြင့် ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်သူလေးတွေကတော့ […]
တစ်နို င်ငံလုံး က စိတ်ဝင်စားေ န တဲ့ စကား စွမ်းရ ည်ပြိုင် ပွဲမှာ အထူးတလည်ဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့သီချင်း
ပြီး ခဲ တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်က တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ စ ကားပြောစွမ်း ရည်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Final ပွဲမှာဆိုရင် စာရေးဆရာမကြီး မစန္ဒာက စိုင်းစိုင်း ရဲ့ အထီးကျန်သီချင်းထဲ က စာသားေ လးကိုရွတ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Video […]